Induction Ukuqinisa Insimbi Pipe Surface-Induction Hardening Machine
Ikhaya / Izicelo / Ukukhishwa Kwesivinini / Induction Ukuqina Kwensimbi Yensimbi Engaphezulu
Isigaba: Ukukhishwa Kwesivinini Tags: thenga umshini wokuqinisa we-induction, lukhuni, ukuqina kwepayipi, insimbi yokuqina, ukuqina kanzima, Umshini onzima we-HF, Amapayipi aqinisa i-HF, ukuqina kokungeniswa, amapayipi okuqinisa induction, ukuqina kwensimbi, ukuqina kokuqina kobuso
Induction Ukuqinisa izingxenye zepayipi zensimbi
Injongo: Ukuqeda ukuqina isetshenziselwa inqubo yokuqinisa ingxenye yensimbi yensimbi ukwenza ngcono ukumelana nokugqoka
Material: Izingxenye zamapayipi wensimbi: 1.6 ”(40 mm) ububanzi bangaphandle, u-0.125” (3 mm) udonga 2 ”(50 mm) ubude
Ukushisa: I-1832 ºF (1000 ºC)
Ukuvama: 88 kHz
Izisetshenziswa Zokushisa Zokungenisa: I-DW-UHF-30 kW, i-100kHz ukufakwa kokushisa uhlelo, ifakwe ikhanda lokusebenza elikude eliqukethe ama-capacitors amane we-2.0 μF okuphelele kwe-2 μF
- An ukufakwa kwe-coil yokushisa yakhelwe futhi yathuthukiswa ngqo yalolu hlelo lokusebenza ukumboza uhla lwezintambo
Inqubo Yokufudumeza Induction: Kusetshenziswa ikhoyili engu-helical-turn emihlanu ukushisa umkhono wensimbi. Ibanga phakathi kwejika lekhoyili liyalungiswa ukuze kunikezwe ukushisa okufana nengxenye yensimbi. Izingxenye ziyacinywa ku-7% polymen quench elandela umjikelezo wokushisa ukufezekisa ubunzima be-RC40.
Ukushisa Ukushisa Ukulandisa: Edumazekile ngamazinga ekhwalithi ephansi kunqubo ebikhishelwe ngaphandle ngaphambili, ikhasimende lisebenzisa ukufakwa ukuletha ukwelashwa kokushisa nokulawulwa kwekhwalithi yomkhiqizo wokugcina endlini.
- Ukushisa ngqo engxenyeni, konga amandla nesikhathi
- Ukulawulwa okuqondile kokushisa
- Ukusatshalaliswa kokushisa okuhambisana nengxenye
- amanani okukhiqiza ngokushesha nokukhiqizwa okwandisiwe
- inqubo engenacala